5 misoro iwe yaunofanira kuyedza muWinterBoard yeIOS 9 | IPhone nhau
Kunyangwe mazuva mashoma apfuura takakuudza nezve a inonakidza imwe nzira kune WinterBoard chii chakakutendera ongorora yako iPhone zvigadziriswe zvishoma kumberi, chakakanganisika ndechekuti zvese zvaive zvisingawirirane, uye kana iwe ukaisa Anemone waisazokwanisa kuenderera uchishandisa chinyakare chishandiso. Kana iwe uri mumwe weavo vakambozviedza uye wafunga kudzokera kuWinterBoard muIOS 9, kana kana ukasangoshandura zvakajairwa mumwe kune mumwe, nhasi tinokuunzira muunganidzwa ungangonakidze iwe.
Zvatinokurudzira pasi apa ndezvishanu zvemisoro yakaunganidzwa mukati WinterBoard yeIOS 9 uye kuti iwe unogona ikozvino kutora kuti utore pane yako iPhone. Kunyangwe vaine hunhu hwakafanana, yega yega dhizaini inosarudza yeakawedzera masisitimu, mashoma uye echinyakare masitayera. Pfungwa ndeyekuti chero zvauri uye uchida rumwe rudzi rwemifananidzo kana zvimwe, unowana dingindira rinonakidza rekupa flip kutaridzika kwefoni yako. Tarisa uone pazasi uye tizivise kuti ndeipi yaunoda zvakanyanya!
1 dombo shora
Sezvauri kuona mune yapfuura skrini, Amber yeWinterBoard muIOS 9 inopa inovhiringidza-isina interface uye neyazvino dhizaini inotevera mitsara yazvino yeanoshanda system. Nekudaro, pane chinhu chimwe chinoita kuti chinyatsoita sezvo iwo ma icon anowedzera mumvuri kuratidzwa kwepikicha yeapp iyo isingavhiringidze, uye panguva imwechete inokupa zano rezvinoitika mune yega yega. Izvo zvinogutsa nekukasira iwe paunotanga kuzvishandisa kazhinji. Mutengo wayo i $ 1,99 paCydia.
Kana iwe uchizviona iwe semunhu anoda minimalism, asi uchida kuve nerakajeka mhando yeakawanda pastel shades ayo asinganetsi kutarisa, saka ichi ndicho chimwe cheakanakisa sarudzo dzaungaite. Mazhinji ezviratidzo akagadzirwa nemimvuri inoita kuti zvive nyore kuziva uye kupa ziso mukana wakasununguka pakushandisa iyo terminal. Mutengo wacho i $ 1,99.
Ndiyo imwe yenyaya dzakanakisa kubata muIOS 9, kunyangwe zvingangoda shanduko uye kugadzirisa kuti ugadzirise zvakanaka kwauri. Muchokwadi, matoni ayo akajeka, ayo akachekerera mativi uye nekukanganisa maitiro emifananidzo yawo kunoita kuti ive imwe yesarudzo dzinonakidza kune avo vasingade kusiya dhizaini nyowani vasina kupukunyuka kubva pamabatiro eIOS. Iyo mutengo pa $ 3,99 uye iyo iPad vhezheni inotengeswa zvakasiyana.
Imwe yenyaya dzinozivikanwa uye dzakakurumbira dzeWinterBoard madimati hainyadzise mushanduro yayo yeIOS 9. Ichine nhamba hombe yemifananidzo inowanikwa uye, panguva imwechete, haina kuodza moyo maererano nehunhu hwayo. Kune vashoma vakamutevedzera uye vakakundikana zvese maererano nemaitiro uye mukuyedza kufananidza wavanomiririra mumaapp. Iyo ine mutengo we $ 2,29.
Musiyano unoita uyu theme nekuremekedza iwo mamwe mavara akasiyana ayo anoratidza akasiyana mazinga emumvuri. Nekudaro, kunyangwe pakutanga pekutarisa inogona kuve inopindirana, chokwadi ndechekuti dzimwe nguva zvinonetsa kuona. Ichokwadi kuti netweak senge Apex 2 kugadzirisa kunogona kuwanikwa uye kuti kwete chete Flatish ine kusagadzikana uku, asi kune mamwe madingindira mazhinji akagadzirwa nenzira iyi anozvipawo. Chero zvazvingaitika, kana iwe uchifarira, mutengo wayo uri $ 3,99.
Neipi yeiyi Themes yeWinterBoard pane iOS 9 unogara here? Pane vamwe here vaunonyanya kufarira vatisina kutaura?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » 5 misoro iwe yaunofanira kuedza paWorldBoard yeIOS 9
Kunobva iDownloadblog 😉
Ini handina kumbobvira ndaisa aya madingindira nekuti ini ndinogara ndine maapps ane icon inouya nekutadza uye haina kana kubatanidza, hazvigone kugadziriswa?
Mhoroi, NAH. Sekuziva kwangu, ma icon haabude nekuti haagadziriswe kuti aenzane. Mune mamwe mazwi, izvo chete izvo zvakagadzirwa nemusunguri weiyo chaiyo dingindira ndizvo zvinoshanda nemazvo. Chirongwa chisingazivikanwe chinowanzo kunge chisingaite, asi maapplication ane mukurumbira, senge tweetbot, anowanzoita zvakanaka.
Ehezve, zvinoitika kwandiri semuenzaniso nemapurogiramu asingafarirwe seRedd, Moovit, map.me zvichingodaro ... Ndatenda nemhinduro Pablo!
Yakanakisa, pasina kupokana: Gentleman.
Edza. Super yakakwana uye yakanyanya kupora!
Ini ndichangobva kurodha theme yerudo uye haishande, chete iyo yekufema icon inoshanda, CC muna ios 9, mune rondedzero yetweak iyo inoenda kubva ios 6 kusvika ios 8
misoro yakanakisa irimo http://www.frenchitouch.fr
1nka, Ambre, 0bvious, visioHD,…. dzese nziyo dzinowedzeredza uye dzakanyatsoitwa. kwandiri hapana zvirinani.